नेपाली यु’वा’हरुलाई से”क्स गर्न आउदैन,यसरी गर्नुपर्छ ?: नायिका सुरविना - Mitho Khabar
नेपाली यु’वा’हरुलाई से”क्स गर्न आउदैन,यसरी गर्नुपर्छ ?: नायिका सुरविना
June 19, 2022 mithokhabarLeaveaComment on नेपाली यु’वा’हरुलाई से”क्स गर्न आउदैन,यसरी गर्नुपर्छ ?: नायिका सुरविना
तर नेपाली मु”भी पनि गर्छु । १० दिनमा काठमाठौँ आउँदैछु । कसको मु”भीबाट हिन्दी फिल्ममा डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ ? सिलगुढीमा बस्ने नेपाली दाजुको फिल्मबाट । मोहन कोइरालाको प्रोडक्सनमा बन्न लागेको छ । निर्देशक कुमार केसी हुनुहुन्छ भने हिरो निक सिंह । सिलगुढीबाट पहिलो हिन्दी मु”भी हो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇 *****
अनि निक सिंह मुम्वईको व्यवसायिक मोडल । हिन्दी र नेपाली मु”भीमा खेल्दा के फरक पाउनुभयो ? साखै फरक त छैन । तर कम गर्ने तरिका चाँही फरक छ । म आफैलाई पनि डाइलगहरु क्लि”यर बोल्न गाह्रो भइरहेको छ । हिन्दीमा सवै फाइन छ । कलाकारले पाउने सव***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇 *****
फ्यासिलिटीहरु दिनुभएको छ । अहिलेसम्म तपाईले कति वटा नेपाली मु”भी गर्नुभयो ? चार वटा भयो । हिन्दी समेत ५ वटा हुन्छ । तपाईलाई से”’क्सी नायिका भन्छन, तपाईको कुन अंग से”’क्सी लाग्छ ?****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇 *****
अचम्म लाग्छ अरुले से”’क्सी भनेकोमा । अनि आफै ऐनामा हेर्छु तब आफ्नो सव श”री”र नै से”’क्सी लाग्छ । अनि लजाउँछु आफै ।पनिविशेष होला नि ? आखा र लि”प्स । तपाईलाई से”’क्सी लाग्ने नेपाली हिरो ? त्यस्तो से”’क्सी लाग्दैन । तर जीवन लुइटेल, अनमोल
केसी, सौगात मल्लसंग काम गर्न चाहन्छु । प्रे”म प्रस्ताव कति आउँछन ? साच्चै भन्दा मलाई प्रे”म प्रस्ताव नै आउँदैन । आजसम्म मलाई कसैले पनि प्रस्ताव गरेको छैन । तपाईले चाँही पठाउनुभयो कि ? हँ, कक्षा १० मा पढ्दा पठाएको थिएँ ।
तर अहिले बु”झेर सा’इड लगाइदिएँ । यो समय काम गर्ने हो क्यारियरमा फोकस गर्नुपर्छ ल”भ गर्ने होइन, त्यसैले म अहिले सिं”गल छु । से”’क्स बारे तपाईको धारणा ? से”’क्सको बारेमा मलाई त्यति ज्ञान छैन । तर आजको यु”वा’हरुलाई से”’क्स ए’जु’केशनको
आवश्यकता छ । से”’क्सको बारेमा जति खुलेर कुरा गर्यो त्यति नै मान्छेहरु सचेत हुन्छन । तपाई चाँही कतिको खु”ल्नु’हुन्छ ?लेरकुराथीहरुसंग । से”’क्स अ’नु’भव लि’नु भएको छ कि छैन ? छैन । म अहिले से”’क्सको लागि मानसिक र शा”रि’री’क रु’पमा त’यार भएको छैन ।
स’म्पूर्ण ध्यान करियर बनाउनै छ । उ’मे’र घ’र्कन लाग्यो जस्तो लाग्दैन अव ? ओ मा’ई गड, म भर्खर २१ व’र्षकी भएँ । कसरी उ’मे’र घ’र्कन्छ ।न्तिममा केही भन्नु छ ?सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई एकपटक नाइके हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहने छु । धन्यवाद चुप्पा ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
बालेनले भोलि धरहरा घुमाएर पूरा गरिदिए सुनिताको ईच्छा (भिडियो सहित)
स्कार्पियो दुर्घटना हुदाँ चालकको मृत्यु…. मनमा दया भए Rip लेख्नुहोला ।
टिकटक प्रतियोगिता हुने
बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाइ अमेरिकाले गर्यो यति ठुलो सम्मान(भिडियो)